/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Trastuzumab (180288-69-1)
SKU: 180288-69-1. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike sitere na gram ka usoro nchịkọta nke Trastuzumab (CAS 180288-69-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Trastuzumab uzuzu eji ya mee ihe banyere ọgwụgwọ ọrịa cancer HER2. A na - ahụ HER2 protein overexpression na 25% -30% nke ọrịa cancer akwara. E gosipụtara trastuzumab, na ma vitro dosays na ụmụ anụmanụ, iji gbochie mmụba nke ụbụrụ mmadụ nke na - emepụta HER2.
Trastuzumab isi Characters
Molekụla Formula: C10H14N6O5
Ọbara arọ: 298.25536
Trastuzumab (180288-69-1) iji mee ihe na steroid
Trastuzumab (CAS 180288-69-1), aha ahia bụ Herceptin.
A na-enye trastuzumab site na infusion n'ime vein (intravenous, IV). A na-enyefe nkeji nkeji 90 minit. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na a kwadoro usoro nhazi nke ụtụtụ, enwere ike inye ihe karịrị 30 nkeji.
Ọnụ ọgụgụ nke Trastuzumab (180288-69-1) nke ị ga-enweta na-adabere n'ọtụtụ ihe, tinyere ogo gị na ibu gị, ọrịa ahụike gị ma ọ bụ nsogbu ahụike ọzọ, na ụdị cancer ma ọ bụ ọnọdụ a na-agwọ. Dọkịta gị ga-ekpebi oge ị ga-eji mee ihe.
Ịdọ aka ná ntị na Trastuzumab
Otu mmetụta dị egwu ma dị egwu nke Trastuzumab nwere ike ịbụ nnyonye anya na mgbapụta nke obi. Mmetụta nke obi (nsogbu obi) na-arịwanye elu na ndị nwere ọrịa obi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ize ndụ dika radieshon na obi, ịka nká, na iji ọgwụ ndị ọzọ na-egbu egbu (dịka doxorubicin na cyclophosphamide). Dọkịta gị nwere ike ịlele ọrụ obi gị tupu i nwee ike ịnara Trastuzumab ma nyochaa obi gị mgbe ị na-agwọ gị. Trastuzumab (180288-69-1) nwere ike ịkwụsị ma ọ bụrụ na mgbaàmà nke obi mgbawa apụta.
Mgbochi na-egbuke egbuke bụ ụdị ọhụrụ nke ọgwụgwọ kansa cancer "ezubere iche." Ngwọrọgwu bụ akụkụ nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Dị ka o sina dị, ahụ na-emepụta ọgwụ nje na nzaghachi (dị ka protein na germ) na-abanye n'ahụ. Mgbochi ahụ na-ejikọta na antigen iji mee ya maka mbibi site na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Na laabu, ndị ọkà mmụta sayensị nyochaa antigens kpọmkwem n'elu sel cancer (lekwasịrị anya) iji chọpụta protein iji kwekọọ na antigen. Mgbe ahụ, na-eji ndị na-edozi anụmanụ na ụmụ mmadụ, ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ ịmepụta mgbochi pụrụ iche nke ga-etinye aka na antigen. Ngwurugwu ga - ejikọta antigens ndị yiri ya dị ka igodo dabara mkpọchi. Nkà na ụzụ a na-enye ohere maka ọgwụgwọ iji dozie mkpụrụ ndụ ụfọdụ, na-eme ka nsị na-erughị na mkpụrụ ndụ ahụ ike. A na-eme usoro ọgwụgwọ mgboclonal ọgwụ nanị maka ọrịa cancer nke a na-achọpụta na antigens (na ọgwụ ndị ọzọ).
Trastuzumab na-arụ ọrụ site n'ilekwasị anya na HER2 / nept receptor na sel cancer. Njiri HER2 na-emepụta ihe ntinye protein na cell cell nke na-egosi ọkwa ndụ nkịtị site n'ịgwa cell ka ọ kewaa na ịmụba. Ụfọdụ anụ ahụ na-egbuke egbuke nwere oke HER2 (HER2 / neu overexpression), na-ebute mkpụrụ ndụ ka ha kewaa na ịba ụba ngwa ngwa. Trastuzumab (180288-69-1) na-ejikọta ndị na-anabata HER2 iji gbochie mkpụrụ ndụ site n'ịba ụba, na-egbochi ịrịa ọrịa kansa na ịme ka ọrịa cancer na-aga n'ihu. O nwekwara ike ịrụ ọrụ site na ịme ka usoro ihe mgbochi ghara ịmalite.
Esi zụta Trastuzumab si AASraw
Gestonorone ntụ ntụ (2137-18-0)